Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ France Florian Thauvin nwa akụkọ akụkọ na-akọwaghị eziokwu
LB na-egosi Full Story of a football Genius onye kasị mara aha na aha njirimara “Rough Diamond ”. Anyị Florian Thauvin Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ / ndabere na ọtụtụ nkwụsị na ON-ihu amaghị ihe banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ akụkụ nke Ndị 23 ndị France nke meriri 2018 ụwa cup na Russia. Otú ọ dị, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole na-atụle Florian Thauvin's Bio nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a, na-ebughị ụzọ, ka anyị bido.
Florian Thauvin nwa akwukwo akụkọ tinyere ihe omuma ihe omuma -Ndụ mbido
Malite, aha ya zuru oke Florian Tristan Mariano Thauvin. A mụrụ ya n'ụbọchị 26th nke January 1993 na Orléans France na ndị nne na nna French bụ ndị kewara n'oge ọ bụ nwata.
N'ihi ya, Young Florian nwere ntakịrị oge nke nwata, mmepe nke hụrụ na ọ nweghị ncheta oge mbụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na ọ gbanwere 'ntụkwasị obi obibi' n'etiti nne na nna bi n'ebe dị anya. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, Thauvin guzosiri ike ga-ekweta na:
“Ejibeghị m oge niile m bụ nwata mee ihe, enwere m olileanya imeju ya ugbu a”
Naanị ihe jikọtara ya ọnụ n'oge ọ bụ nwata bụ ịhụnanya ya maka football, ịhụnanya nke tọrọ ntọala tupu ya ewere nzọụkwụ mbụ ya dị ka nwa wee gosipụta site na foto dị na ụlọ nne nne ya.
"Enwere foto n'ụlọ nne nne m mgbe m nọ n'etiti ọnwa isii na otu afọ, enweela m bọọlụ n'aka m,"
Enwere ike ịsị na Thauvin bi ndụ ndụ football na ncheta ya ndị ọ hụrụ n'anya laghachiri n'ụbọchị ọ nwetara akwụkwọ na football Academy na Châteauroux.
Florian Thauvin nwa akwukwo akụkọ tinyere ihe omuma ihe omuma -Ọrụ na-ewuli Elu
N'adịghị ka ọtụtụ ndị ọkachamara na football bụ ndị malitere ọrụ ịgba chaa chaa na ụlọ ha na-eto eto, Young Thauvian aghaghị ịkwaga na Orléans (obodo ya) na Châteauroux Academy maka ọzụzụ, na-etinye oge site na ihe fọdụrụ nke ezinụlọ ya. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, ọ na-ele àjà ndị ọ na-eji aka ya eme maka ọchịchọ nke mmasị dị ka ihe bara uru.
“Ahapụrụ m obodo m, Orléans, wee kwaga Châteauroux. Naanị m na-ala n’ụlọ ná ngwụsị izu. Naanị ugbu a, apụrụ m ịhụ ihe ndị m hapụrụ n'oge ahụ enyeworo m aka iru ebe m nọ taa ”
Florian Thauvin nwa akwukwo akụkọ tinyere ihe omuma ihe omuma -Bilie Iji Mara Aha
N'ịga n'ihu njem njem ya ma ọ bụ na-eme njem Florian Thauvin nwere ọganihu site n'ịbụ onye na-enye ọzụzụ mgbe nile na Châteauroux ịghọ ihe dị mkpa maka ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ntorobịa gụnyere FC ML Ingre (2000-2005), Saint-Jean-de-la-Ruelle (2005 -2007), US Orléans (2007-2008), Ụkwụ Grenoble (2008-2010).
O nwere akwụkwọ mbụ ya na LOSC Lille na Jenụwarị 2013 maka obere ego nke £ 3.15m. Nlekọta football sochirinụ na-ahụ na ya na SC Bastia na ndị na-agba agba n'etiti Marseille na Newcastle bụ ebe ọ na-agba àmà ma na-ada. Ka o sina dị, ọ malitere inwe ahụmahụ ọ bụla na-agafe ma nọgide na-enwe mmụọ dị mma.
Ama ama ama ada ke enyịnusụn̄ esie ke ini enye akaduakde ndidụk ubọk nsinsi ye Marseille ke ndaeyo 2016, okụtde ufan 30 ke uyo 78 ye ke ndinọ 26 aka. Iji kpochapụ ya, e depụtara ya na ndị 23 ndị France National Squad nke meriri iko Russia 2018 FIFA ụwa. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Florian Thauvin nwa akwukwo akụkọ tinyere ihe omuma ihe omuma -Ndụ mmekọrịta
N'elu ọ bụla French Footballgenisuss bụ egwuregwu na Florian adịghị iche. Nwanyị nwanyị ya na ọtụtụ ọnwa bụ ihe a na-akpọ Charlotte Pirroni.
Site na ihe niile na-egosi, duo kacha mma ma jikọta ọnụ.
Charlotte enyekwara nkwado dị ukwuu na ọrụ Florian gụnyere ịja ndị otu mba France oge ọpụpụ Russia 2018 World Cup.
Agbanyeghị na mmekọrịta ha dị na mbido ya, Fans enweghị ike ichere ịhụ ihe ga-eme ya ogologo oge.
Florian Thauvin nwa akwukwo akụkọ tinyere ihe omuma ihe omuma -Nlekọta Ọrụ Nlekọta Oge
Dị ka anyị kwuburu na mbụ, Thauvin chere ihu na ọrụ ọrụ tupu ya enweta ọnọdụ nke Football Genius. Ihe kwesiri ekwuru bu ihe ndi metutara oge nwata.
Thauvin kwuru ugboro ugboro site na ndị dọkịta na ịkụ ọkpọ nwere ike ịbụ ihe siri ike n'ihi ya n'ihi nsogbu azụ ya malitere n'oge ọhụụ nke ịgba ọsọ football
Tụkwasị na nke a, Grenoble gara Bankrupt mgbe Thauvin nọ na ụlọ. Mmepe ahụ mere ọtụtụ ndị ka ha hapụ ịgba ọsọ football ha ma e wezụga Thauvin nke nọgidere na-eguzosi ike ruo mgbe ọ ga-enwe ike ịnyefe na SC Bastia.
Florian Thauvin nwa akwukwo akụkọ tinyere ihe omuma ihe omuma -Tuxedo Row
Otu ihe omume na-atọ ọchị nke mere ka ọpụpụ Thauvin si Newcastle bụ nhọrọ ya maka ejiji maka egwuregwu oge. Thauvin juru anya na ọ gosipụtara Tuxedo!.
Uwe ya adabaghị nke ọma na onye nkatọ ya na otu oge Newcastle na-aga n'ihu Alan Shearer onye wepụtara oge iji tụọ Thauvin:
"Ọ na-atụgharị na ya! Nke a bụ azụmahịa siri ike anyị nọ n'ebe a. Ọ bụghị ihe ọchị. "
Thauvin abụghị ka Alan Shearer nwee ubi ọzọ ụbọchị ọ zara:
“Alan Shearer katọrọ m n'ụzọ siri ike site n'ikwu na m na-eme onwe m ka m bụrụ onye m na-abụghị, n'agbanyeghị na ọ bụghị naanị m na-ebu bowtie. Gịnị kpatara o ji abụ m mgbe niile? Ọ ga-amasị m ịhapụ nanị m. ”
Florian Thauvin nwa akwukwo akụkọ tinyere ihe omuma ihe omuma -Ebumnuche kpatara aha njirimara
Nickname Florian Thauvin; Rough Diamond bụ n'ezie ihe dị ntakịrị Diamond na Rough. A na-eji okwu ahụ kọwaa afọ ndị nkà mmụta French nke afọ ole na ole tupu ọtụtụ ndị kwenyere na ọrụ ya na pitch abụghị maka ikike nkịtị ọ nwere n'ihi ihe ndị na-egbochi ya gụnyere enweghị oge ịgba egwu, ọtụtụ ịgbazinye ego na klọb n'etiti ihe ndị ọzọ na-egbochi.
Florian Thauvin nwa akwukwo akụkọ tinyere ihe omuma ihe omuma -Eziokwu ahụ
Florian bụ onye na-eto eto nke dị jụụ nke na-ekwu okwu site n'ile anya nke ọma. Ọ bụ ezie na obi ike ya na-apụ na n'èzí na-egwu egwu nwere ike imeri onye dị mpako, ọtụtụ Fans na-aghọta ya dị ka onye na-emetụ aka ruo n'ókè nke ịkpụzi ụzọ edozi ha mgbe ọ gasịrị. Ọ na-enwekwa ọchị dị ka egosipụtara na nhọpụta mgbakọ mgbaru ọsọ ya na foto dị n'okpuru ebe a.
Ọrụ kachasị amasị ya n'oge gara aga na-agụnye ịtụ egwu na ndị enyi na igwu egwuregwu vidio. Na mgbakwunye, ọ na-ege ntị na egwu iji nyere aka kpuchie isi ya ma bulie mmụọ ya.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ anyị Florian Thauvin Nwatakịrị Akụkọ akụkọ gbasara eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.
Bọchị gbanwee: Jenụwarị 24, 2021